Ny fisorohana azy io moa dia ny fitoerana amina trano azon’ny rivotra sy tsy mando ary tsy misy vovoka. Tsy tokony ho be fanaka ny trano hatoriana satria kely rivotra ary ny voankazo sy legioma no tokony hameno ny sakafo. Ankehitriny isika manomboka miditra tsikelikely amin’ny andro mafana. Ady amin’ny moka sy tazo indray no miandry eto, hoy izy. Ny fanalana rano miandrona sy lobolobo, fampiasana lay, tena mety ilay fametrahana aro vy na “grille de protection” kely amin’ny varavarankely. Tokony hidina ny trano vao mamono jiro, hoy izy. Ankoatra izay, ny aretin-kibo sy fivalanana koa dia mpahazo rehefa miha mafana, hoy izy, ka mila tandremana ny fahadiovana. Hatreto aloha dia ilay kohaka sy tazo no tena manomboka mamely.